Raggii weerarey Sinagoogga xubin kama aheyn ururrada xagjirka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sinagooga Göteborg oo ubax iyo qoraallo jacayl lagu harqiyey.. sawir: Nora Lorek/ TT.
Raggii weerarey Sinagoogga xubin kama aheyn ururrada xagjirka
La daabacay måndag 11 december 2017 kl 12.28
Ruumaanka (xabsiga) ayaa weli lagu hayaa saddexdii nin ee lagu tuhun-sanaa iney fiid-nimadii sabtidii ina dhaaftay isku dayeen sidii ey ku wax-yeeleeyn lahaayeen sinagoog ku yaala magaalada Göteborg.
Raggan ayaa lagu tuhun-san yahay isku day dil dab ah, hase yeeshee ey dhammaantood iska dheereeyneyaan tuhunkan. Xeer-ilaaliye Stina Lundqvist ayaa ka gaabsatay inay ka faalooto sababta falkan ka dambeeysay, hase yeeshee sheegtay in aaney saddexda nin wax xiriir ah la laheyn ururrada xag-jirka fog ee garabka midig.
–May, xaaladda hadda lagu jiro ma jiraan wax xiriir ah oo lagu caddeeyey iney raggani la leeyihiin ururrada xag-jirka garabka midig, sida ay sheegtay Stina Lundqvist.
–Waxaa jirra fikirro aannu ka haysanno sababta ka dambeeysay falkan, hase yeeshee maahan mid aanu dooneyno inaannu iminka ka hadalno.
Saddexda nin ee la tuhun-san yahay oo da’doodu kor u dhaaftay 20 jirro ayaa wareeysiyo lala yeeshey axaddii shalayto. Stina Lundqvist, ahna xeer-ilaaliye ka howl-gasha magaalada Göteborg oo gacanta ku haysa howshan ayaa laga fileyaa iney ugu dambeeyn arbacada foodda innagu soo heeysa dacwad ku soo oogto si ruumaanka loogu sii hayo.
–Waxaannu baarista isla wadnaa ciidanka ammaanka waxaanan rajeeynayaa inaan berito oo salaasa ah aan go’aan ka gaari doono inaan dalbado in eedeeysaneyaasha ama cid ka mid ah ruumaanka lagu sii hayo iyo in kale, sida ay sheegtay mar ay la hadleeysay laanta wararka ee Ekot.
Raggan oo qabashadooda ay sabab u ahayd caddeeymo ey ka mid yihiin kaamerooyinka wax lagu ilaaliyo ayaa illaa iminka lagu tuhun-san yahay isku day dil oo dab la adeegsaneyo. Laba ka mid ah ayaa lagu tuhun-san yahay tuhunnada midka adag (sannolika skäl), halka kan saddexaadna tuhunnada midkiisa hooseeya (skäligen misstänkt).
–Mdda keliya ee aan oran karaa waxay tahay in ninka aan u doodayaa uu iska dheereeynayo dacwadda lagu tuhun-san yahay, sida uu sheegay gar-yaqaan Stefan Fredin, oo u doodaya mid ka mid ah saddexa nin, mar uu la hadlayay hayadda wararka Sweden ee magaceeda loo soo gaabiyo TT.
Goob aan ka fogeeyn halka uu falku ka dhacay ayey ku xafladeeyneyeen dhallin-yaro, kolkii ey dadyoow tobaneeyo gaareya oo afka duubtey ey waxyaabo holcaya ku tuureen barxadda dibadda.
Goobtaa ayey maanta gelinka dambe booqasho ku tegi doonaan xarunta sinagoogada xubno dawladda meteleya oo kala ah wasiirka tamarta Ibrahim Baylan iyo wasiiradda cimilada Karolina Skog.
Baaristii weerar lagu qaaday Sinagooga oo halkeedii ka socota